के हो पेप्टिक अल्सर ? « Nepal Break
-पेप्टिक अल्सरबाट बच्न छ भने धुम्रपान नगर्नुहोस् ।
-तमाखुयुक्त पदार्थबाट टाढै रहनुहोस् ।
-मांसाहार, क्याफित तथा मदिराको सेवन नगर्नुहोस् ।
-चिल्लो, पिरो र मसालेदार भोजबाट बच्नुहोस्
२. शरीरमा हुन नदिनुहोस् आइरनको कमी
बच्चालाई जन्म दिएपछि धेरै महिलाहरुलाई कुपोषणको समस्याबाट गुज्रिनुपर्छ । बच्चा जन्मेलगत्तै कुपोषणको नराम्रो असर आमा र बच्चा दुवैमा पर्छ । गर्भावस्थाको क्रममा र त्यसपछि हुने कुपोषण बच्चाको लागि घातक हुन सक्छ ।
गर्भावस्था पनि कुपोषणको कारण
नवजात शिशुको लागि जोखिम
आमाको लागि समस्या
कुपोषणलाई कसरी रोक्ने ?